Fitandremana - Hengtai (Hong Kong) mizara Co., Ltd.
Fitandremana amin'ny fampiasana modely LCD
Aza adino ity manaraka ity rehefa mampiasa ity LCD tontonana ity
1. Manan-jo hiova ny mpanamboatra
(1). Raha misy tranga tsy azo tohaina, ny mpanamboatra dia manan-jo hanova ny singa passive, ao anatin'izany ny resistors fanitsiana backlight. (Resistor, capacitor ary mpamatsy singa tsy mitovy amin'ny passive hafa dia hamokatra endrika sy loko samihafa)
(2). Ny mpanamboatra dia manan-jo hanova ny kinova PCB / FPC / Back light / Touch Panel ... eo ambanin'ny lafin-javatra tsy hay tohaina (mba hahatratrarana ny fitoniana eo amin'ny famatsiana dia manan-jo hanova ilay kinova ny mpamokatra nefa tsy misy fiatraikany amin'ny toetran'ny herinaratra sy ny refy ivelany. )
2. Fitandremana fametrahana
(1). Tsy maintsy mampiasa zoro efatra na lafiny efatra hametrahana ilay modely
(2). Ny firafitry ny fametrahana dia tokony hodinihina mba tsy hampisy hery tsy mitovy (toy ny fihenjanana mihenjana) amin'ny modely. Ny toe-javatra fametrahana module dia tokony hanana tanjaka ampy mba tsy hampitana mivantana ireo modely ny hery ivelany.
(3). Azafady apetaho amin'ny takelaka miaro mangarahara eo amboniny mba hiarovana ny polarizer. Ny takelaka fiarovana mangarahara dia tokony hanana tanjaka ampy hanoherana ny hery ivelany.
(4). Ny rafitry ny taratra dia tokony horaisina mifanaraka amin'ny mari-pahaizana momba ny mari-pana
(5). Ny karazana asidra acetic sy ny karazana klôlôma ampiasaina amin'ny fonosana dia tsy voalaza, satria ilay teo aloha dia mamokatra entona manimba izay manimba ny polarizer amin'ny hafanana avo, ary ilay farany kosa mamaky ny valin'ny electrochemical.
(6). Aza mampiasa vera, tweezera na zavatra mafy noho ny pensilihazo HB hitarika, manosika na mamafa ny polarizer miharihary. Aza mampiasa mianatra manadio ireo akanjo feno vovoka. Aza mikasika ny ambonin'ilay polarizer amin'ny tànana miboridana na lamba matavy.
(7). Fafao haingana ny rà na ny vongan-drano. Hiteraka fahasamihafana sy fiovan'ny tarehy izy ireo raha mifandray amin'ny polarizer mandritra ny fotoana maharitra.
(8). Aza sokafana ny raharaha, satria tsy manana tanjaka ampy ny fizaran-tany anatiny.
3. Fitandremana amin'ny fandidiana
(1). Ny tabataba amin'ny spike dia miteraka tsy fahombiazan'ny fizaran-tany. Tokony ho ambany noho ireto voltita manaraka ireto izy: V = ± 200mV (fihenam-bidy sy fihenam-bidy)
(2). Miankina amin'ny maripana ny fotoana fihetsika. (Amin'ny hafanana ambany dia hitombo kokoa izy io.)
(3). Ny famirapiratana dia miankina amin'ny mari-pana. (Amin'ny maripana ambany dia lasa ambany kokoa izy) ary amin'ny maripana ambany dia mihalava kokoa ny fotoana fihetsika (mila hamirapiratra ny hamiratra aorian'ny famindrana ny ora)
(4) Mitandrema amin'ny fametahana rehefa miova tampoka ny mari-pana. Ny fanondranana dia mety hanimba ny fifandraisan'ny polarizer na ny herinaratra. Aorian'ny fanjavonana dia hiseho ny fanosotra na pentina.
(5). Rehefa naseho nandritra ny fotoana ela ny lamina raikitra dia mety hiseho ny sary sisa tavela.
(6). Ny maoderina dia manana boriborintany matetika. Ny mpanamboatra ny rafitra dia tokony hanafoana ny fanelingelenana elektromagnetika. Ny fomba fanamafisana sy fiarovana dia azo ampiasaina mba hampihenana ny fanelingelenana mety ho zava-dehibe.
4. Fanaraha-maso ny famoahana herinaratra
Ny maodely dia mifangaro amin'ny boribory elektronika, ary ny fivoahana elektrostatika dia mety miteraka fahasimbana. Ny mpandraharaha dia tsy maintsy mitafy brasele elektrostatika ary totoina. Aza mikasika azy mivantana amin'ny tsimatra.
5. Fepetra fisorohana ny fanoherana ny fahazavana mahery
Ny fipoahan'ny hazavana mahery vaika dia hiteraka fahasimban'ny polarizer sy ny sivana miloko.
6. Fiheverana fitahirizana
Rehefa tehirizina ho faritra fanampiny ny modules dia ilaina ny mitandrina.
(1). Tehirizo amin'ny toerana maizina izy ireo. Aza aseho ny hazavana amin'ny masoandro na ny jiro fluorescent. Tazomy eo ambanin'ny maripanan'ny hamandoana ny 5 ℃ ka hatramin'ny 35 ℃.
(2). Ny ambonin'ilay polarizer dia tsy tokony hifandray amin'ny zavatra hafa. Soso-kevitra ny hamonosana azy ireo rehefa mandefa.
7. Fitandremana amin'ny fikirakirana sarimihetsika miaro
(1). Rehefa rovitra ny sarimihetsika miaro dia hiteraka herinaratra mijanona eo anelanelan'ny sarimihetsika sy ny polarizer. Izany dia tokony hatao amin'ny alàlan'ny fametahana herinaratra sy ny fitaovana mitsoka ion na nibontsina tsimoramora ilay olona ary nibolisatra tamim-pitandremana.
(2). Ny sarimihetsika miaro dia manana lakaoly kely mifatotra amin'ny polarizer. Mora ny mijanona eo amin'ny polarizer. Azafady mba esory tsara ilay sarimihetsika miaro, aza fikosehana lamba maivana.
(3). Rehefa voatahiry mandritra ny fotoana maharitra ny modely misy ilay sarimihetsika miaro, aorian'ny famoahana ilay sarimihetsika miaro dia indraindray mbola misy lakaoly kely dia kely eo amin'ilay polarizer.
8. Raharaha hafa mila fitandremana
(1). Aza asiana fiatraikany be loatra amin'ilay maody na aza manova na manova ny modely
(2). Aza mamela lavaka fanampiny amin'ny takelaka misy pirinty, manova ny endriny na manolo ny ampahany amin'ny maodely TFT
(3) Aza esorina ny maodelin'ny TFT
(4). Aza mihoatra ny isa farany ambony indrindra mandritra ny fiasa
(5). Aza atsofoka, aforeto na ahodiho ny maodelin'ny TFT
(6). Soldering: terminal I / O ihany
(7). Tehirizo: Tehirizo ao anaty fonosana fitoeran-tsakafo anti-static sy tontolo madio
(8). Ampahafantaro ny mpanjifa: azafady mba mifantoha amin'ny mpanjifa rehefa mampiasa ny modely, aza asiana kasety amin'ny ampahany amin'ireo modely. Satria mety hesorina ilay kasety hanimba ny firafitry ny faritra izy io ary hiteraka tsy fetezan'ny herinaratra ao amin'ilay maody.
Raha voafetra ny mekanisma ary tsy azo ihodivirana ny fametahana kasety amin'ny faritra, dia misy ireto fomba manaraka ireto hisorohana an'io toe-javatra tsy mahazatra io:
(8-1) Ny hery adhesive an'ny kasety fampiharana dia tsy tokony ho lehibe noho ny hery fametahana ny kasety [3M-600];
(8-2) Aorian'ny fampiharana ny kasety dia tsy tokony hisy ny fiasan-koditra;
(8-3) Rehefa ilaina ny manala sarona ny kasety dia asaina mampiasa fomba fanampiana fanafanana hanazavana ny kasety.